Cabdiweli Muudey “Maamulka Koofur Galbeed ayaa iga celiyay Safarkeyka Baraawe” – Bulsho News
Cabdiweli Muudey “Maamulka Koofur Galbeed ayaa iga celiyay Safarkeyka Baraawe”
Guddoomiye ku xigeenkii koowaad ee Golaha Shacabka, Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey ayaa sheegay in maamulka Koofur Galbeed ay ka hor istaageen in uu tago magaalada Baraawe ee Gobolka Shabeellada Hoose.
Shir jaraa’id oo uu ku qabtay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in diyaaradii uu raaci lahaa lagu war-galiyay in aaney isoo qaadi karin, taasi oo uu ku tilmaamay in aan la oggoleyn in uu tartamo kursiga uu hore ugu fadhiyay oo deegaan Doorashadiisa tahay Koofur Galbeed.
“Qoladii diyaaradda markii aan iri maxaa jira, waxay ii sheegeen in maamulka Koofur Galbeed diideen aan raaco diyaaradda, haddii ay I qaadaana diyaaradda la soo ridi doono” ayuu yiri Muudey.
Cabduweli Sheekh Ibraahim Muudeey ayaa markale u sharaxan kursiga HOP-145 ee Golaha Shacabka, waxaana la sheegay in taratanka doorashada laga reebay.
Maamulka Koofur Galbeed weli kama jawaabin eeda Guddoomiye Muudey ee ah in ay ka hor-istaageen safarkiisa magaalada Baraawe.